♫♪Post By♫♪ ကြာဖြူနွယ် No comments:
ငါ အစ သူအဆုံး အားလုံးက
♫♪Post By♫♪ ကြာဖြူနွယ် 1 comment:
“ ညှို့ ငင် …လွမ်း ”
လပြည့်ည ဆိုတော့ လမင်းကြီးကရွှန်းရွှန်းမြမြ သာနေပါရဲ့ ….
ပြူတင်းမှန်ချပ်တွေကိုထိုးဖောက်ပြီး နွယ့်ကုတင်ပေါ် ဖြာကျလင်းပလာတဲ့
လရောင်ကို ဘယ်လိုတားရပါ့ …
လူတစ်ကာ မျှော်လင့် တောင့် တတတ်တဲ့ လရောင်ကို နွယ်မုန်းပါတယ်…။
အပေါင်းက နွယ့် ကို ငြူ စူကြမှာပါ…။
ည ဆိုတာ လ မရှိရင် မပြည့်စုံတော့ဘူးတဲ့ လား..
ညရေ…ကြယ်လေးတွေနဲ့ နေပေးပြီးလမင်းကြီးကိုမခေါ်ပါနဲ့ လား ဟင် …
ညှို့ ငင်နေလို့ ပါ…
အလွမ်း တွေ ဟာ နွယ်ဘယ်လိုမှထိန်းချုပ်လို့ မရဘဲ ယိုစိမ့် စီးဆင်းလာတော့တာပါပဲ…
လမင်းကြီး ကို ငေးမော့ကြည့်ရင်း နွယ့် မျက်ဝန်းထဲမှာ အလွမ်းရဲ့ တမန်တော်မျက်ရည်စတွေ ခိုတွယ်လာပြီ…။
မာန်တင်းနိုင်ခဲ့လို့ လို့ နွယ့် မျက်ရည်တွေကို သူမမြင်ဖူးပါဘူး…
မိန်းမတစ်ယောက် ပေါ့ ….တကယ်တော့နွယ်ဟာရင်ထဲက ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ကို တိတ်တိတ်လေးသိမ်းခဲ့ ရသူဆိုတာတော့သူ မသိခဲ့ပါဘူး..။
သိအောင်မကြိုးစားခဲ့ တာလည်းပါမှာပါ..လို့ နွယ် စွပ်စွဲရင် ခနဲ့ တဲ့ တဲ့နဲ့သူ ပြုံးဦးမှာပါ…
ကိုယ်မနှစ်သက်တဲ့အကျင့် စရိုက်တွေရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ကို မကြိုက်တဲ့ ကြားကနေ သံယောဇဉ်မကုန်နိုင်သေးတာ နွယ့် ရဲ့ ဘ၀ပေး ကုသိုလ်များလား…
နွယ် မနှစ်လို တဲ့ သူ့ ကိုမမေ့နိုင်သေး ဘဲ နင့် နင့် သည်းသည်း လွမ်းမိပြန်လေတော့ နွယ့် နှလုံးသား တွေ နာကျင်ကြေကွဲရပါပြီ။
တကယ်တော့…သူ လည်းသိခဲ့ တာပဲလေနွယ် ဟာ သူ့ ရဲ့ မထိတထိ ၊ ခနိုးခနဲ့ ပြောတာတွေကို တခွန်းမှ အကြောမခံပေမယ့်သူ့ ဖြစ်ချင်တာတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ဖြည့် ဆည်းပေးခဲ့ တယ်ဆိုတာ သူ နိုင်ငံခြားထွက်မသွားခင်ကတည်းက သိမှာပါ…။
သူ နဲ့ နွယ် လုပ်ငန်းခွင်တခု မှာ စတွေ့ တုန်းကတည်းက အလုပ်ကြိုးစားပြီး တိုးတက်အောင်မြင်ချင်တဲ့ သူ့ ကို နွယ် သဘောကျမိပါတယ်..။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေနဲ့ခင်မင်လာကြတော့လည်း သူ့ ရဲ့ အိပ်မက်တွေကို နားထောင်ပေးရင်း သူ့ လိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်လာဖို့ ဘယ်လို လုပ်ပေးရမလဲလို့ တွေးပေးခဲ့ တယ်…။
မိဘမရှိ တော့ ဘဲ လောကကြီးထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း ရုန်းကန်ကြိုးစားနေရတဲ့ သူ့ အပေါ် သနားမိတယ်…။
လာလေမို့နွယ်ဟာ နွယ့် ဘ၀အတွက်ထက် သူ့ ဘ၀အတွက်ပဲ အမြဲစဉ်းစားပေးခဲ့ပါတယ်…။
ပြောရရင်…သံယောဇဉ် နှောင်ကြိုးကို ငင်ခဲ့သူက နွယ်ပါ …။
သူဟာ သူ့ အတွက်အမြဲဦးစားပေးပြီး သူ့ အပေါ်ကောင်းလွန်းလို့ သာ နွယ့် ကို ခင်တွယ်လာပေမယ့်တကယ်တော့အတ္တကြီးတတ်သူပါ…။သူဖြစ်ချင်တာ၊
သူလိုချင်တာတွေနဲ့ လုံးထွေးရစ်ပတ်ပြီးနွယ့် စိတ်ကို နားလည်မပေးတတ်သူပါ….။
ဒါပေမယ့်လည်းလေ.. ကမ္ဘာဦးအစကနေ ခုထိလည်း အမြဲ ဖြစ်တည်နေတဲ့ 
နွယ် ဟာ သူ့ ဘ၀အတွက်ပဲခေါင်းထဲထည့် ပြီး သူသွားချင်တဲ့ နိုင်ငံ သွားရဖို့၊ သူသင်ချင်တဲ့ ပညာသင်ရင်း သူလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ရအောင် အသိမိတ်ဆွေတွေ အကူအညီနဲ့လိုက်စုံစမ်းပေးခဲ့တယ်…။သူအွန်လိုင်းကနေစာမေးပွဲဖြေဖို့ အတွက်
သူ ၀င်ခွင့်အောင်ပြီးသွားဖို့ ဗီဇာကျလာတော့ သူ့ ထက်ပိုပျော်ခဲ့ တယ်….။
ဘယ်လိုထိုင်ဆိုပြီး တစ်တွတ်တွတ်ပြောနေတဲ့ နွယ့် ရင်ထဲကသံယောဇဉ်ကို
ဒါပေမယ့် …သူ မသိချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့ တယ်….။
နွယ့်စေတနာကိုအသိအမှတ်ပြုတဲ့စကားတစ်ခွန်းမှသူမဆိုဖူးဘူး…နွယ့်ကိုညင်သာနူးညံ့ တဲ့လေသံနဲ့ သူ တခါမှမပြောဖူးဘူး…သူ့ ကိုလိုက်ပို့ တဲ့ နေ့…. လေဆိပ်ထဲမှာ သူ့ ကိုအကြာကြီးခွဲရတော့မှာမို့ နွယ် ၀မ်းနည်းနေပေမယ့် သူကတော့ နောက်ပြောင် ရယ်မောနေနိုင်ခဲ့ တယ်..။
ကျောင်းလည်းတက်ရပြီ၊အလုပ်လည်းရပြီဆိုတော့မှနွယ့်မှာဟင်းချနိုင်ပါတော့တယ်..။ သူ့ အပေါ်လေးနက်တဲ့ မေတ္တာ ၊ စေတနာ တွေ ထားနေတဲ့ နွယ်ဟာ သူ့ ဆီက စကားတစ်ခွန်းကိုတော့လိုချင်မျှော်လင့် မိတာအမှန်ပါ …။
နွယ့် .. ကိုချစ်တယ်..ဆိုတဲ့ စကား သူပြောလာမယ့်အချိန် နွယ် စောင့်ခဲ့ပါတယ်…
ဒါပေမယ့် …. သူ ကျောင်းတက်ရင်း အလုပ်လုပ်ရင်း သုံးနှစ်ကျော် ကြာလာပေမယ့်နွယ်ထင်သလို ဖြစ်မလာခဲ့ ဘူး…
နွယ့် ဆီကဂရုစိုက်တာပဲ ခံချင်ပြီး နွယ့် ကို ဂရုစိုက်ကြင်နာတဲ့ စကား သူမပြောခဲ့ဘူး..။
ပြောဆိုလာတော့ ရင်နာလိုက်တာ…နွယ်လိုချင်တာ ဒီလိုစကားတွေမှမဟုတ်တာ…
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့စွာခံစားရင်ခုန်ချင်တဲ့နွယ်ဟာသူ့ ရဲ့ သားပြောမယားပြော
ပုံစံနဲ့ ပြောတတ်တဲ့ ကြမ်တမ်းတဲ့ စကားလုံးတွေကို လုံးဝ မနှစ်မြို့ ဘဲ စိတ်တိုဒေါသဖြစ်ရမြဲပါ…။
ချစ်ခွင့် ပန်တတ်မှ..တန်ဖိုးထားပြီးဘ၀ခရီးဖော်ဖြစ်ခွင့်တောင်းတတ်မှ ...
ဒီလို သတ်မှတ်တဲ့ နွယ့် ဆန္ဒတွေကို ပြောပြနေရဲ့ သားနဲ့မသိချင်ယောင်ဆောင်နေ တာဟာ နွယ့် ကိုမြတ်နိုးမှုမရှိတာလို့ ပဲ နွယ်ယူဆပါတယ်….။
နွယ်..ဟာသူဘယ်အချိန်ခူးခူးခြွေခြွေအလွယ်တကူကြွေကျလာမယ့် ပန်းတစ်ပွင့် ...လို့သူမှတ်ယူထားပုံပါ..။နွယ့်ကိုချစ်ခွင့်မပန်ဘဲနဲ့…ချစ်သူရည်းစားလိုပိုင်စိုးပိုင်နင်းပြောတတ်တာဟာစည်းကျော်တာမို့ နွယ် အပြောမခံတော့ပါဘူး။ ဒီလိုကျပြန်တော့ သူပြောတာမခံတဲ့ နွယ့် ကို ကြီးကျယ်ပါသတဲ့ ။
နွယ်အပြောမခံပေမယ့် သူဒီလိုပြောတာကိုရယ်မောပြီးသဘောကျတဲ့ကောင်မလေးတွေ.. အွန်လိုင်းမှာ အများကြီး ရှိပါသတဲ့ … သူတို့ တွေနဲ့ ပြောရတာပျော်ရပါသတဲ့ .
.နွယ့် လို သူ ပြောသမျှဆင်ဆာလိုက်ဖြတ်နေတဲ့ မိန်းကလေး နဲ့ပြောရတာ စိတ်ကျဉ်းကျပ်ပါသတဲ့ ….။
သူ..နွယ့် ကို တန်ဖိုးမထားဘူးဆိုတာပါပဲ…။
နောက်ဆုံး အွန်လိုင်းမှာ တွေ့ ရပြောရတာ ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေတဲ့ အခါ
နွယ်ရင်နာနာ နဲ့သူ့ ကိုဘလော့လုပ်လိုက်ပါတယ်..။
ဒီလို သူ့ ကိုဘလော့လုပ်လိုက်တဲ့ နွယ့် ကိုလည်း သူ ဆတ်ဆတ်ခါ နာသွားပါတော့တယ်…။နောက်ဆုံး နွယ့် ဆီ သူပို့ တဲ့ မေးလ် မှာ ရေထားတာက…
နွယ် အဖြစ်သည်းနေပေမယ့်အွန်လိုင်းမှာသူပိုင်စိုးပိုင်နင်းပြောသမျှခံမယ့်
မိန်းကလေးတွေ ၊ သူ နဲ့ ချက်တင်ပြောရရင် ပျော်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ရှိပါသတဲ့ …၊ သူတို့ နဲ့ ပဲ ပြောပါတော့မယ်တဲ့ ….။
ဒီလိုနဲ့ …နွယ်တို့ …တကယ်ဝေးသွားပါတယ်…
နွယ့် ကို သူ ပြန်မဆက်သွယ်ခဲ့ပါဘူး…။
နေပါတော့လေ….၊ ကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့ ယောင်္ကျားတယောက်ကို နွယ့် ဘက်က ဘယ်တော့မှ အရင် စပြီးမခေါ်တော့ပါဘူး။
ဇာတ်သိမ်းသွားပြီလို့ပြောရမယ့်နွယ်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဇာတ်လမ်းမှာဓါးစာခံဖြစ်သွားရတာက တော့သူ့ ကို ချစ်တဲ့ နွယ့် နှလုံးသားပါ…။
မင်း..နာကျင်ပင်ပန်းမယ်ဆိုတာသိပေမယ့် နွယ် မလျှော့ နိုင်ခဲ့ဘူးကွယ်….။
သိမ်မွေ့ တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို တန်ဖိုးထားလွန်းလို့သူ့ ကိုစွန့် ခွာ ခဲ့ တဲ့ နွယ့် ကို နားလည်ပေးပါနော်…။
ခုလိုညဉ့်နက်ချိန်ဆို…အွန်လိုင်းမှာသူပိုင်စိုးပိုင်နင်းပြောသမျှသဘောကျနေတဲ့ ကောင်မလေးတွေနဲ့ အီစီကလီလုပ်ရင်းသူပျော်နေမယ်နဲ့ တူပါရဲ့ ….။
ဒီလိုလူမျိုးကို လွမ်းရတာ မတန်လို့ နွယ် မလွမ်းချင်ပါဘူး ….မေ့ ပစ်နေပါတယ်…။
ထာဝရ ဘယ်တော့မှ သတိမရဘဲမေ့ နိုင်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့ နွယ့် ကို ကျေးဇူးပြု ပြီး မနှောင့် ယှက်ပါနဲ့ လား လမင်းကြီးရေ…
လွမ်းအောင်ညှို့ ငင်တတ်တဲ့့လရောင်တွေ ပြန်သိမ်းဆည်းပေးပါ
လွမ်းစေတတ်တဲ့လရောင်မရှိတဲ့ ကမ္ဘာလောက မှာ နွယ် နေပါရစေ
လရောင်ရေ…နွယ့် ဆီ ကို ဘယ်တော့မှ မလာပါနဲ့ တော့နော်
လွမ်းဆွတ်ခြင်းဆိုတာ… ကို နွယ့် ဘ၀ထဲကနေအပြီးအပိုင်မောင်းထုတ်ချင်လို့ ပါ….။
၂ဝ၁၄ ဧပြီ Faces မဂ္ဂဇင်း
နူးညံ့ မှု မရှိ
မာန နဲ့ သွန်းထုထားတယ်
ဆင်ခြင်တုံတရားကချုပ်ထိန်း
တစ် အပေါင်း တစ်
ဒီမယ်ရှင့် .. ဒီမယ်
ရှင်က လက်စောင်းထက်ထက်နဲ့ 
စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာတရားကို ကိုယ်စားပြုခဲ့တာပါ။
ရှင်က ကဗျာနဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပြုပြင်ချင်သလို
နှလုံးသားတွေနူးညံ့ သိမ်မွေ့ စေဖို့ 
သံသရာမှာ ဆွေမျိုးမတော်စပ်ဖူးသူမရှိတာမို့ 
သူ့ သားသမီးဆို ကိုယ့်သားသမီးလို
သူ့ မိသားစုဆို ကိုယ့်မိသားစုလို
သူ့ အိုးအိမ်ဆို ကိုယ့်အိုးအိမ်လို
၅၂၈ အချစ်နဲ့စာနာပြီးလည်း ချစ်တတ်ရမယ်။
ပူပြင်းလောင်မြိုက်တဲ့ ရမ္မက်နဲ့ 
နူးညံ့ သိမ်မွေ့ တဲ့ အချစ်ကို မကွဲပြား
ရှင့် နဖူးမှာချွေးဥတဲ့ အခါ
ညင်သာဖွဖွ လေး ရှင်နမ်းရှိုက်တတ်တာဟာ…အချစ်
ဒီ့ထက်ပိုတဲ့အတွေ့ အထိမရှိ
အနာဂါတ်မှာ အတူနေကြတဲ့ အခါ
ရှင် နဲ့ ချွပ်စွပ်တူမယ့်သားလေး
အချစ်မှာ ကြမ်းတမ်းရိုင်းစိုင်းတဲ့ ရင်ခုန်သံတွေအကျုံးမ၀င်ဘူး။
အချစ်မှာ ပူလောင်ပြင်းပြတဲ့ ရမက်တွေမပါဘူး။
အချစ်မှာ အိမ်ထောင်မပြုသေးဘဲ ဆေးကဒ်တွေစားနေတာမရှိဘူး။
ရွံရှာညစ်ပတ်ဖွယ်တွေ ကို သူတို့ အချစ်လို့ ထင်နေကြတာ
ကျွန်မကလောင်နဲ့ရေးသမျှဟာ
ရှင်က အမရာ၊ကန္နရီ ၊မဒီ ၊သမ္ဗူလ
ငါ့စကားနွားရ ပြောသမျှ သည်းခံပြီး
ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်ဟာ သူ့ ဘက်ကိုယ့်ဘက်
တိုက်ပွဲဝင်ကူကြမယ့် ရဲဘော်ဘက်တွေပါလို့ ။
ရှင် နဲ့ ကျွမက ဥပမာပြရရင် ..
ရှင်က ညာ ဆို ကျွန်မက ဘယ်
ရှင်က ဘယ် ဆို ကျွန်မက ညာ
ပန်းတိုင်ကို ရောက်တော့မှာပေါ့ …။
ရှင်က စိတ်ဓါတ်ကြံ့ ခိုင်မွန်မြတ်ပြီး
တစ် နဲ့ တစ်ပေါင်းရင် နှစ် ဖြစ်
တစ် ထဲက တစ်ကိုနုတ်ပြီး
ပတ်စာခွာ ဖျာလိပ် လို့ 
နှလုံးသားကို ချိတ်ပိတ် လိုက်ရုံ
ဘာလာလာ ငါ မငြင်းပါဘူး...။
ခုတော့ ဖြင့် ...
ဖွယ်တယ်တယ် ပေါ့ ရွှတ်သရမ်းလို့ 
လွမ်းရမှာတောင် မျက်ရည်နှမြောတယ် ...။
“ မျှော် ”
“ စောင့်ရမှာပဲဒကာမကြီး...ကိုယ့်စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင်အရင်လုပ်ပါဦး..
စိတ်တည်ငြိမ်မှ ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာ ခိုင်မာတာကွယ့်”
“ ဟုတ်ပါပြီ…ဒါပေမယ့် တစ်ပတ်လောက်တော့သည်းခံပြီးစောင့် ဦး ”
ကျောင်းဆောင်ပေါ်မှဆင်းကာဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်း အနောက်ဘက်သို့ထွက်လာခဲ့သည်။
သီသီ ရွာသို့ပြန်မရောက်ဖြစ်တာကြာနေပေမယ့်ကံကော်ပင်၊ သရက်ပင်၊မရမ်းပင်များ
အုံ့ ဆိုင်းကာကျယ်ဝန်းလှသည့်ကျောင်း ၀င်းကြီးကတော့ ပြောင်းလဲမသွားပေ။
ဘုန်းကြီးကျောင်းနောက်ဘက်ရှိသီလရှင် ကျောင်းဆောင်လေးများ ကလည်းအရင်လိုပင်ရှိနေဆဲ..။
ပေါက်ပင်တန်းရွာသည် သီသီ့ ဇာတိချက်ကြွေမွေးရပ်မြေပါ…။
သည်ပေါက်ပင်ကြီးများက သီသီတို့ ကလေးဘ၀က ဆော့ကစားနေကျနေရာ..။
သီသီ့ဘ၀အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားခဲ့သော်လည်းပေါက်ပင်ကြီးများကတော့မပြောင်းမလဲနွေရောက် တိုင်းပွင့်နေဆဲပါလား..။အတွေးများနှင့်အတူ ပေါက်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်ရပ်မိသည်။
သီသီ့ခြေအစုံကကြွေကျနေသည့် ပေါက်ပွင့်ဖတ်များကိုနင်းမိသဖြင့် အပင်ပေါ်မော့ကြည့်မိသည်။
ပေါက်ပွင့်များက အပင်ပေါ် ၌တစ်ဝက်ခန့် ဝေနေပြီးမြေပြင်၌တစ်ဝက်ခန့်ကြွေနေလေ၏။
တပို့ တွဲလ၏ရာသီပန်းသည် ယခု တပေါင်းလရောက်တော့ ကြွေကုန်ကြလေပြီ.။
အပူငွေ့ ပါသည့် နွေလေရူးလေးတစ်ချက်အတိုက်မှာ ပေါက်ပန်းတစ်ပွင့် ဝေ့ကနဲကြွေကာ
သနားစရာပေါက်ပွင့်လေး..။ အပင်ထက်၌တခြားအပွင့်များကျန်နေပါလျှက်နှင့် 
သီသီ မမြင်ဖူးလိုက်သော အဖေသည်လည်း အကြွေစောသည့်ပေါက်ပွင့်လေးလိုပင်…။
သီသီတစ်နှစ်သမီးတွင်အဖေဆုံးသွားသဖြင့်အမေသည် အကြော်သည်မုဆိုးမဘ၀ဖြင့် 
အဖေဆုံးသွားသည့်အခါအမေက ယောက္ခမအိမ် မှာပဲဆက်နေတော့အမေ့ယောင်းမကမကြည်ပေ..။ အဖိုးနှင့် အဖွားဆုံးသွားသည့်အခါမှာတော့မိဘပိုင် အိမ်နှင့် ယာကွက်များအားလုံးကို
အမေ့ ယောင်းမကရောင်းပစ်ကာတစ်နယ်တစ်ကျေးသို့ အပြီးပြောင်းသွား၏။
အမေ့ ကိုတဲတစ်လုံးဆောက်သာရုံ မြေကွက်လေးသာပေးသွားခဲ့ ပြီးလုံးဝပြန်မကြည့်တော့ပေ။
ရိုးအေးပြီးပညာမတတ်သည့်အမေကလည်းဘာမှမတောင်းဆိုတတ်ဘဲကျန်ခဲ့ရကာ သားအမိနှစ်ယောက်နေပြီး အကြော်ရောင်းစားလာခဲ့ရင်းသီသီ့ကိုပြုစုရှောက်ခဲ့သည်။
သီသီတို့အကြော်တဲလေးသည်ကျောင်းသွားရာလမ်းတွင်ရှိသောကြောင့့် အတော်အသင့်ရောင်း ကောင်းပါသည်။
ကလေးပီပီ အိပ်ရေးမက်သည့် သီသီက မျက်နှာမကြည်ဘဲဆူပုတ်နေလျှင်အမေကချော့သည်။
“မနက်စောစောထတာကျက်သရေရှိတယ်သမီးရဲ့…အမေဒီလိုအကြော်ရောင်းမှ အမေ့ သမီးလေး ကျောင်းနေရမှာ…စာတတ်မှာ..ဒါမှ အမေ့ လို မအ မှာပေါ့ ”
ရွာရှိမိန်းကလေးအများစုကသေစာရှင်စာဖတ်တတ်ရုံသာကျောင်းနေပြီးမိဘလယ်ကို ကူလုပ်ကြချိန်မှာ အမေကတော့သီသီ့ကိုဘွဲ့ရသည်အထိကျောင်းထားမည်ဆိုသောအခါ အများက ပြောကြ၏။
မိန်းကလေးပဲ.. တော်ရုံအတန်ထိပဲကျောင်းထားပေါ့ ..”
“ကျွန်မတို့ လင်မယားက သမီးလေး ကို ပညာတတ်ဖြစ်စေချင်တာ..သူ့ အဖေသာရှိရင်လည်း
ဘွဲ့ ရအောင်ထားမှာပဲ..ဒီတော့ ကြိုးစားရှာရမှာပဲအမရယ် ”
အမေသည်မနက်ပိုင်းအကြော်ကြော်..နေ့လည်နှီးဇကာယက်ပြီးဝင်ငွေရှာကာ သီသီ့ကိုကျောင်းထားခဲ့ လေ၏။အမေ့ စိတ်ကိုသိထားသောသီသီကလည်းလိမ္မာသိတတ်စွာဖြင့့်စာကြိုးစားခဲ့သည်။
မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်များ ဖြင့်တောက်ပရဲရင့်နေသည်မှာ နွေတွင်ပွင့်သည့်ပေါက်ပန်းလေးများကဲ့သို့ ပင်..။
ငယ်ဘ၀ကိုပြန်တွေးရင်း အမေ့ ကိုသတ်ိရစိတ်ဖြင့် မျက်ဝန်းအိမ်ထဲခိုတွယ်လာသောမျက်ရည်စ များကြောင့် သီသီကြည့်နေသည့်ပေါက်ပွင့်လေးက အမြင်အာရုံတွင်ေ၀၀ါးသွား၏။ သီသီဆယ့်ငါးနှစ်တွင်
အမေဆုံးခဲ့၏။ ယခု သီသီ့ အသက် ၃၂ နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ ၁၇ နှစ်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း
အမေသာရှိလျှင်..ဆိုသည့်အတွေးအားအမေဆုံးသွားအချိန်မှစ၍ စိတ်ထိခိုက်စရာကြုံလေတိုင်းယခုထိသီသီတွေးမိစမြဲ..။ သီသီ့ အိပ်မက်တွေထဲ အမေအမြဲရှိနေစမြဲ။
အသံကြားသဖြင့် လှည့်ကြည့်လိုက်ရာ သီသီထိုင်ရာအနီးတွင် ခွေးပိန်တစ်ကောင် ပေါက်ပင်ကြီးကိုမော့ကြည့်ပြီးအူနေသည်..။
ထိုစဉ် လေကြမ်းကြမ်းတစ်ချက်တိုက်ပြီး ပေါက်ပွင့်များဖျောကနဲ ကြွေကျပြန်ရာ ထိုခွေးက ပြေးဟပ်သည်။
သို့သော် ပေါက်ပွင့်အား နုတ်သီးဖြင့် ထိတွေ့ ကြည့်ပြီးသည့်အခါ ပြန်လွှတ်ချကာအပင်ပေါ်မော့ကြည့်ပြန်၏။
ထိုခွေးကိုကြည့်ရင်း သီသီ သည် ရွာပြန်ရောက်ရောက်ချင်း ဆရာတော်ကြီးဟောခဲ့ သည့်
“ဒကာမကြီးက အခုခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခတွေဆိုတာ ငါ့ ကျမှ ဖြစ်ရလေခြင်း၊တစ်လောကလုံး ငါသာကံအဆိုးဆုံးလို့ထင်နေတာမှတ်လား..တစ်ကယ်တော့ လူဖြစ်လာရပြီဆိုမှ ဒုက္ခချည်းပါကွယ်။
ပိုထင်ရှားအောင် ခုလိုပေါက်ပန်းတွေပွင့်တဲ့ အချိန်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အကြောင်းလေးတစ်ခုပြောပြမယ်..။
တစ်ခါတုန်းက ခွေးတစ်ကောင်ဟာ အလွန်ဆာလောင် မွတ်သိပ်လွန်းလို့ အစာကို အပူတပြင်းလိုက်ရှာရင်း
ပေါက်ပွင့်ရဲရဲတွေ ပွင့်နေတဲ့ ပေါက်ပင်ကြီးကို တွေ့သတဲ့။ တွေ့ တဲ့အခါ အပင်အောက်ကနေ မျှော်ကြည့်ရင်း ဒီခွေးစိတ်ထဲမှာ ပေါက်ပွင့် ရဲရဲတွေကို အမဲသားတွေလို့ ထင်မိသတဲ့ ..ဒါကြောင့် ကျလာမယ့်ပေါက်ပွင့်ကို အပင်အောက်ကနေမျှော်နေသတဲ့။
ပေါက်ပွင့်လည်းကြွေကျလာရော အဲ့ ဒီခွေးဟာ ၀မ်းသာအားရနဲ့ စားရပြီဆိုပြီးပြေးဟပ် လိုက်တော့ မှ သူထင်သလို အမဲသားမဟုတ်မှန်းသိသွားတယ်။ဒါပေမယ့် ဗိုက်ကလည်း ဆာနေတော့ဒီခွေးက အားမလျှော့ သေးဘူး။
ဩော် ဒီတစ်ပွင့်ကသာ ပေါက်ပွင့်ဖြစ်နေတာပါ။ အပင်ပေါ်ကျန်သေးတဲ့ဟိုး နီနီရဲရဲ တွေကတော့ အမဲသားပဲဖြစ်မှာ
ပါဆိုပြီး အပင်အောက်က မခွာနိုင်သေးဘဲ ဆက်မျှော်နေသတဲ့။
နောက်တစ်ပွင့်ကြွေကျလို့ ပြေးဟပ်တော့လည်း ပေါက်ပွင့်သာ ဖြစ်နေသတဲ့။
ဒါလည်း ဇွဲမလျော့ဘူး။ အပေါ်မှာအမဲသားကတော့ကျန်ဦးမှာပဲဆိုပြီး ပေါက်ပွင့်ကြွေလိုက်
ပြေးကြည့်လိုက်နဲ့ပေါက်ပင်ကြီးကို မျှော်ရင်းပေါက်ပွင့်တွေ တစ်ပွင့်ပြီးတစ်ပွင့် တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေလာလိုက်တာ တစ်ပင်လုံးကုန်သွားပေမယ့်မျှော်လင့်တဲ့ အမဲသားကိုတော့ မရခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံး တော့ အဲ့ ဒီခွေးဟာ အစာကို မျှော်လင့်တောင့်တရင်းနဲ့ပဲ ပေါက်ပင်အောက်မှာ အဆာလွန်လို့ သေပွဲဝင်သွားရရှာသတဲ့ ..။
ဒီလိုပဲ ဒကာမကြီး ၊ ဦးဇင်းတို့ တွေဟာလည်း လူရယ်လို့ ဖြစ်လာကတည်းကသမုဒယသံယောဇဉ်တွေနဲ့ 
ရစ်ပတ်ဖွဲ့ နှောင်ရင်းပျော်ရွှင်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ သုခကိုပဲမျှော်လင့် တောင့်တရှင်သန်နေကြတယ်။
စိတ်ဆင်းရဲစရာပေါ်လိုက်၊အားတင်းလိုက်။အခုဒုက္ခလာပေမယ့် သုခဆိုတာကြီးကိုငါစောင့်မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးမျှော်လင့် ချက်နဲ့ အသက်ရှင်နေကြတာပဲလေ။ဒုက္ခပြီးရင်းဒုက္ခပဲရှိတဲ့ ပေါက်ပင် ကနေ သုခနဲ့တူတဲ့အမဲသားကိုလိုချင်ဇောနဲ့ မောဟိုက်ပြေးလွှားနေတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်သနားရကောင်းမှန်းမသိခဲ့ကြဘူး။
ရှင်သန်ရာတစ်ဘ၀တာမှာချမ်းသာအစစ်ကိုရနိုးနဲ့မျှော်ရင်း…မျှော်ရင်း အချိန်တွေသာ ကုန်လာခဲ့ပေမယ့် ကိုယ်မျှော်နေတာတွေဟာ ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေပါလားလို့ မစဉ်းစားမိသေးဘဲ
ပေါက်ပွင့်များကို လိုက်နမ်းကြည့်နေသောခွေးပိန်လေးအားကြည့်ကာ ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောပြခဲ့သည်မှာမှန်လိုက်လေခြင်းဟု သီသီ တွေးမ်ိသည်။
သီသီသည်လည်း အမေဆုံးသွားခဲ့စဉ်က နောက်ထပ်ပေါက်ပွင့်တစ်ပွင့် အား ထပ်မံမျှော်ခဲ့ဖူးခဲ့လေ၏။
သည်လိုနှင့်ကျောင်းတက်လာသည်မှာသီသီရှစ်တန်းအရောက်တွင်အမေနေမကောင်းဘဲ တစ်ရှောင်ရှောင်ဖြစ်လာပေမယ်ပိုက်ဆံကုန်မှာစိုးသဖြင့်ရွာရှိဆေးပေးခန်းပင်မသွားခဲ့ပေ။ အမေရှိလျှင်အရာရာပြည့်စုံကာကျောင်းမှန်မှန်တက်နေရသည့်သီသီကလည်း စာကျက်ဖို့ ကလွဲလျှင်
အမေ့ကို ဂရုစိုက်ရကောင်းမှန်း မသိခဲ့ပါ။
အမေ မူးလဲသွားသည့်နေ့ ခင်းက သီသီအိမ်မှာမရှိပေ။နွေရာသီကျောင်းပိတ်သွားပြီမို့ 
ပေါက်ပင်ကြီးများအောက်တွင်ပေါက်ပန်းများကောက်ကာသီသီတို့မိန်းကလေးတစ်သိုက် ကတမ်းခုန်တိုင်းကစားနေကြ၏။အမေမူးလဲသွားသည်ကိုကြားလျှင်ကြားချင်းအိမ်အရောက်ပြန်ပြေးခဲ့ သော်လည်း
ဝေဒနာကိုဂရုမစိုက်ခဲ့သည့်အမေ့ခမျာဘယ်လိုဖြစ်ပြီးဘာရောဂါဖြင့် ဆုံးသွားမှန်းပင်မသိလိုက် ပေ။
အမေ့ ကိုသာတကမ္ဘာလို အားကိုးလာခဲ့သောသီသီသည်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစွာဖြင့် စိတ်ထိခိုက်ကာ အမေဆုံးသွားပြီးနောက်ပိုင်းတော်တော်ကြာသည်အထိစကားမပြောနိုင်ဘဲဆွံ့ အသလိုဖြစ်သွားသောကြောင့်
စိတ်လျှော့ ထားသည့်သီသီ့ ဆီသို့ ကျောင်းတက်ရန်အခွင့်အရေးကရောက်လာခဲ့သည်။
ဆရာတော်ကြီးနှင့်ဆွေရိပ်မျိုးရိပ်မကင်းသောမြို့ပေါ်မှအောင်သရဖူဆီစက်ပိုင်ရှင်သားအမိက ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလှူဘွယ်ပစ္စည်းများနှင့်ရောက်လာခဲ့ရာမှသီသီ့ အကြောင်းသိသွားလေသည်။ သူဌေးဆုံးသွားပြီးသားအမိနှစ်ယောက်တည်းနေသောမေမေကြီးတို့ကသီသီ့ကိုမြင်မြင်ချင်း ဂရုဏာသက်မိပါသတဲ့ ။
ထိုအချိန်က အပျိုပေါက်မလေးသီသီသည်ကိုယ့်ကိုသနားကြင်နာစွာဖြင့် ဖေးမနှစ်သိမ့်ပြီး
ဆရာမပြောပြဖူးသည့်မနှင်းဖြူလေးကိုလာကယ်သည့်မင်းသားလေးများလားဟုထင်ကာ ရှက်ရွံ့ စိတ်လှုပ်ရှားမိပါ၏။
ကိုးတန်းကျောင်းများဖွင့်ချိန်ရောက်သည့်အခါမှာတော့ မြို့ ပေါ်တွင်နေကာသီသီကျောင်းတက်ခွင့် ရခဲ့သည်။ အိမ်အလုပ်များကူလုပ်ရသော်လည်းသီသီ့ ကိုညှာတာချစ်ခင်သော မေမေကြီးကြောင့် နေရတာပျော်လာသော
သီသီသည် အောင်သရဖူအိမ်ကြီးကို ကိုယ့်အိမ်လိုထင်မှတ်လာကာ ကိုယ့်ထက်ဆယ်နှစ်ကြီးသော ကိုကိုကြီးကိုလည်း ဆိုးနွဲ့ ရင်း ပျော်ရွှင်လာ၏။
အပျိုဖြန်းလေး၏နှလုံးသားအိပ်မက်ဦးသည်လည်းကိုကိုကြီးဖြစ်လာသည်။ ကိုကိုကြီး၏ချစ်ခင်ကြင်နာမှုများကိုမျှော်လင့်ရင်ခုန်ခဲ့ရသည်မှာလည်း မကြွေသေးသည့်ပေါက်ပွင့်ကို အပင်အောက်မှ မျှော်နေရသလိုပင်…။
ညနေရောက်လာသောကြောင့် ကျနေပူပူ က သီသီ့ ကိုယ်ပေါ်ဖြာကျလာပေမယ့် မထချင်သေးဘဲ
ခုထိပေါက်ပင်ကြီးကိုလှည့်ပတ်မျှော်နေသည့်ခွေးပိန်လေးကို သီသီသနားကြင်စွာဖြင့် 
ငေးကြည့်နေမိသည်။ကိုယ်တိုင် မျှော်ခဲ့ဖူးသောကြောင့်လည်း ခွေးလေးကို ကိုယ်ချင်းစာမိသည်။
အားကိုးချစ်ခင်ခြင်းများစွာဖြင့်တစ်လောကလုံးမှာကိုကိုကြီးသာ..ဟူသော စိတ်ဖြင့် သီသီတွယ်တာ
သီသီဆယ်တန်းအောင်တော့ အဝေးသင်တက်ရင်း ဆီစက်နှင့်တွဲဖွင့်ထားသည့် ပဲဆီသန့်အရောင်းဆိုင်တွင်ထိုင်ရောင်းပေးရသည်။တော်ပေါ်သူအမေ့ ထံမှဖြူဖွေးလှပခြင်းများကိုအမွေရခဲ့ သည့်သီသီကမိန်းမချောလေးမို့ချူချင်သူတွေများပေမယ့်သီသီ့နှလုံးသားကကိုကိုကြီးကလွဲပြီး လက်မခံနိုင်ပါ။ထိုအချိန်ကိုကိုကြီးကဆီစက်အပြင် နိုင်ငံခြားသို့ ပဲအမျိုးမျိုးတင်ပို့သောပွဲရုံကို လည်း ဦးစီးနေ၏။ကိုကိုကြီးနှင့် မေမေကြီးတို့ မကြာခဏ တကြိတ်ကြိတ်စကားများပြောဆိုနေသည်ကိုရိပ်မိပေမယ့်စီးပွားရေးကိစ္စဟုပင်ထင်ခဲ့မိသည်။
အားကိုးယုံကြည်ကာ ကိုကိုကြီးနှင့် နေရာချပေးချင်သလိုစကားဆိုလာတော့ သီသီ့ရင်တွေပေါက်ထွက်မတတ်ကြည်နူးရင်ခုန်ခဲ့ရသည်။လူလတ်ပိုင်းရောက်လာပြီဖြစ်သည့်သူဌေးသား
ကိုကိုကြီးမှာတွဲနေသည့်ချစ်သူလည်းမမြင်မိသောကြောင့်လည်းသီသီ့ စိတ်ကူးယဉ်မှုများက ရင့်သန်အမြစ်တွယ်လာခဲ့သည်။
သို့ သော်လည်း သီသီ့ အိပ်မက်များကိုရိုက်ချိ်ုးပစ်သူက သီသီချစ်ရသည့်ကိုကိုကြီးပင်။
ရုတ်တရက်ကိုကိုကြီးကနိုင်ငံခြားထွက်သွားသည့်အခါမှာတော့ မေမေကြီး ဒေါသူပုန်ထကျန်ခဲ့ရသလို သီသီလည်း ရင်ကွဲပက်လက်ကျန်ခဲ့ရလေသည်။
ထိုအချိန်ကျမှ သိရသည်က ကိုကိုကြီးချစ်သူက နိုင်ငံခြားမှာပါ၊မေမေကြီးတို့ သဘောမတူသဖြင့်ကိုကိုကြီးက ချစ်သူနှင့် အတူတူလိုက်မသွားရဘဲ ကျန်ရစ်ခဲ့ရသည်။နောက်ဆုံးတော့ မေမေကြီးက
သီသီ နှင့် နေရာချပေးမည့်အထိပြောလာသည့်အခါ အမေကိုဆန့်ကျင်ကာကိုကိုကြီးက ချစ်သူဆီလိုက်သွားခြင်းပင်။
ထိုအချိန်ကတည်းက ရင်ထဲမှ နှလုံးသားပွင့်ဦးကြွေခဲ့ရသောသီသီသည် မေမေကြီးနှင့် အတူတူ
ဆက်နေရင်းတကယ့်သမီးအရင်းလိုလုပ်ကိုင်ပေးခဲ့ပါသည်။နာကျင်ကြေကွဲနေသည့်ကြားမှ ရေခြားမြေခြား မှာ ကိုကိုကြီးအဆင်ပြေပါ့ မလားဟုစိုးရိမ်ပူပင်ကာနေ့စဉ်ဆုတောင်းပေးပါသည်။
သမီးလေးမွေးကြောင်း၊စရိတ်ကြီးပြီးအဆင်မပြေကြောင်း၊မိန်းမကသမီးတစ်ဖက်နှင့်မို့ အလုပ်လုပ်ရတာ ကသီကြောင်းများ သိရသည့်အခါမှာတော့ တင်းမထားနိုင်တော့ဘဲကိုကိုကြီးတို့ ကို ပြန်လာပြီး အောင်သရဖူကိုလာဦးစီးရန်ခွင့်ပြုလိုက်လေတော့သည်။
ကိုကိုကြီးတို့ပြန်လာချိန်မှာတော့တစ်နှစ်သမီးလေးသဲဆုကိုမြင်မြင်ချင်းမေမေကြီးလက်ပေါ်က မချနိုင်အောင်သည်းသည်းလှုပ်ချစ်သွားသလိုသီသီ့ဘ၀မှာလည်းတွယ်တာရမည့်သံယောဇဉ်ကြိုးတစ်ချောင်းတိုးလာရ ပါလေတော့သည်။
သီသီ့တုန်းကလည်းကိုကိုကြီးတို့ မိသားစုပြန်ရောက်လာပေမယ့် အောင်သရဖူမှထွက်မသွားနိုင်ဘဲ မေမေကြီးနှင့်အတူ ဆက်နေရင်း ကိုကိုကြီးသမီးလေးကို ချစ်ခင်တွယ်တာခဲ့ပါသည်။
ကိုကိုကြီးကဆီစက်နှင့်ပွဲရုံကိုဦးစီးလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသည့်ကြားမှသီသီထိုင်သော ဆီဆိုင်မှာ ကိုကိုကြီးမိန်းမက
သူကိုယ်တိုင်ထိုင်မည်ဆိုလေတော့မေမေကြီးနှင့်စကားများကြသေး၏။ မိန်းမကိုမလွန်ဆန်နိုင်သည့် ကိုကိုကြီးကြောင့်
သားအမိ စိတ်ဝမ်းကွဲသွားမှာမလိုလားသော သီသီကိုယ်တိုင်ကပဲ ဆီဆိုင်မှာမထိုင်တော့ဘဲ အိမ်အလုပ်များကိုသာမေမေကြီးနှင့်ကူလုပ်ရင်း မီးဖိုချောင်ထိန်းကြီးဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာခဲ့ရသည်။
သဲဆုလေးကသီသီ့ကိုစိမ်းသွားလေသည်။ကျောင်းတက်သည့်အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာတော့ သဲဆုလေးက သီသီ့အားအိမ်ဖော်တစ်ဦးကဲ့ သို့ ပင်ဆက်ဆံလာသည်။
ရင်နင့်ဝမ်းနည်းစွာဖြင့်ကွယ်ရာမှာ ကြိတ်ငိုရပေမယ့် သမီးလေးကို သီသီအချစ်မလျော့ ခဲ့ပေ..။
သီသီဟာ အိမ်တစ်အိမ်မှာ အိမ်ဖော်ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာ။ မေမေကြီးက သမီးအရင်းလို မြှောက်စားနေပေမယ့် 
သီသီသာမရှိလျှင်မောက်မာသောချွေးမကြောင့်မေမေကြီးစိတ်ညစ်ရမှာကိုသိသောကြောင့်လည်းဘွဲ့ ရပြီးပေမယ့် 
သို့ သော်လည်း အောင်သရဖူ၏စည်းစိမ်ချမ်းသာများကိုမက်မောသောကိုကိုကြီးမိန်းမ က
သဲဆုလေး ရှစ်နှစ်သမီးအရွယ်တွင် ကိုကိုကြီးမိန်းမ ရုတ်တရက်ဆုံးသွားလေ၏။
ထိုအခါမှာတော့ မိန်းမစိတ်ဖြင့် အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘဲ ကြေကွဲစိတ်ညစ်နေသည့်အကိုကြီးကို အားပေးနှစ်သိမ့်ရင်း
သဲဆုလေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးရင်းအောင်သရဖူအိမ်ကြီးမှ မခွာနိုင်ခဲ့သည့် သီသီ့ ဘ၀မှာလည်း ပေါက်ပင်ကြီးနားမှ မခွာနိုင်သည့် ခွေးပိန်အလားပင်..။
ညနေစောင်းလာပြီမို့ နေမင်းကြီး၏အရောင်ဖျော့ကာ အပူချိန်လည်းလျော့ကျလာ၏။
တည်းခိုနေထိုင်သည့်သီလရှင်ကျောင်းလေးသို့ပြန်ဖို့ အချိန်တန်နေသော်လည်းသီသီ မပြန်ချင်သေးပေ။
ခွေးပိန်လေးကိုလှမ်းကြည့်မိလေတော့ မတွေ့ ရတော့ပေ။စား ၍မရသောပေါက်ပွင့်များကို စိတ်ပျက်ပြီးပြန်သွားပြေီလား..။စိတ်ပျက်တာမြန်လှချည်လားခွေးပိန်လေးရယ်။။။
သီသီကတော့ ဆယ်စုနှစ်တစ်နှစ်နီးပါး သဲဆုလေးကိုစိတ်မပျက်ခဲ့ပေ။
ကိုကိုကြီးမိန်းမဆုံးတော့သုံးတန်းသာရှိသေးသည့် သဲဆုလေးကို သနားကြင်နာလှ သောကြောင့်
သီသီပိုချစ်ပြီး ပိုဂရုစိုက်ခဲ့မိခြင်းသည် ကိုကိုကြီးကိုလက်ထပ်ချင် ၍မဟုတ်တာကို
သို့ သော် အထိန်းအကွပ်မရှိတော့ဘဲစိတ်လေပြီးအရက်စွဲနေသည့်ကိုကိုကြီးကိုပြုစုလုပ်ကိုင်ပေးဖို့ 
နှင့် သဲဆုလေးကို အနီးကပ်ကျွေးမွေးသုတ်သင်ရန်အတွက် အများအမြင်သင့်တော်ဖို့ အတွက်
မေမေကြီးက လက်ထပ်ပေးတော့ သီသီမငြင်းသာခဲ့ပေ။ သဲဆုလေးကိုသီသီမဟုတ်သော
မိခင်မဆုံးခင်သွေးထိုးပေးထားခဲ့သောစကာများကြောင့်သီသီ့အပေါ်အမြင်စောင်းနေသော သဲဆုလေး ကခါးခါးသီးသီးဖြစ်ခဲ့သလိုသဲဆုလေးကလွဲပြီးတခြားသားသမီးမလိုချင်တော့သည့် ကိုကိုကြီးကလည်း
မေမေကြီး၏ဆန္ဒကိုမလွန်ဆန်နိုင်သောသီသီသည်နောက်ဆုံးမှာတော့ သားသမီးမယူရဟူသော ကိုကိုကြီး၏တောင်းဆိုမှုတစ်ခုဖြင့် လက်ထပ်ခဲ့ ရလေ၏။
မရလေအောင်သားကြောဖြတ်လိုက်သည့်အခါ သီသီ ရင်နာပေမယ့် ကျေနပ်ပါသည်။
ကိုကိုကြီးသမီးသဲဆုလေးသည် သီသီ့ သမီးပဲဟုခံယူထားပြီးအစွမ်းကုန်ချစ်ခင်အလိုလိုက်ခဲ့၏။
သည်လိုနှင့် …ပေးသည့်မေတ္တာများ ပြန်လာလေမလားဟုတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် တစ်ရာသီပြီးတစ်ရာသီ မျှော်လင်ခဲ့မိသော်လည်းသဲဆုလေးသည်သီသီ့ကိုအိမ်ဖော်တစ်ဦးလိုသာ ဆက်ဆံပြောဆိုဆဲ…။
ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ခေါ်ခဲ့သလို သီသီဟုပင်ခေါ်ဆဲ..။
မေမေကြီးလည်းဆုံးသွားပြီးသဲဆုလေးအထက်တန်းကျောင်းသူဖြစ်လာခဲ့သည့်အချိန်ထိ သီသီ့ အပေါ်
သဲဆုလေးက ခပ်စိမ်းစိမ်းသာနေပေမယ့် သီသီကတော့ အပျိုဖော်ဝင်လာသည့်သမီးလေးအပေါ် မိခင်တစ်ယောက်၏ပူပင်ခြင်းများဖြင့် အမြဲပူပင်ကာ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နေခဲ့သည်။
မနှစ်ကကိုးတန်းကျောင်းပိတ်ရက်များမှာသဲဆုလေးမူပျက်နေသည်ကိုရိပ်မိပြီးစုံစမ်းကြည့်သည့်အခါ သဲဆုလေးကိုအသည်းအသန်လိုက်နေသောကောင်လေးတစ်ယောက် ရှိလာတာသိခဲ့ရသည်။
သဌေးသမီးလေးသဲဆုကိုဘာကြောင့်ကပ်နေလည်းဆိုတာအားလုံးရိပ်မိကြသော်လည်း ကာယကံရှင်သဲဆုလေးက မသိပေ။
သွား ကာရမှတ်များနည်းသွားသည့်သဲဆုလေး၏စိတ်များကထိုကောင်လေး၏သိမ်းသွင်းခြင်း ခံနေရပြီဆိုတာ
ရိပ်မိလေတော့ သီသီ့ မှာခေါင်းမီးတောက်ခဲ့ရသည်။
အရိပ်အမြွက်သတိပေးမိသည့်သီသီိ့ကိုရန်သူလိုဆက်ဆံလာသည့် သဲဆုလေးကြောင့် 
နောက်ဆုံးကြံရာမရဖြစ်ကာကိုကိုကြီးကိုဖွင့်ပြောပြတိုင်ပင်ခဲ့ပါသော်လည်းသီသီထင်သလိုဖြစ်မလာခဲ့ပေ။ သမီးကိုယုံလွန်းသောကိုကိုကြီး က သီသီသတိပေးသည်ကိုအရေးမစိုက်သည့်အခါ သီသီ့ ရင်ထဲ နွေနေမင်းလို
မျက်ရည်စများကို အသာအယာလက်ဖြင့် စမ်းသုတ်လိုက်သည်။
သည်နှစ်ဆယ်တန်းစာမေးပွဲဖြေခါနီးအချိန်တုန်းကသီသီ့မှာသဲဆုလေးကိုသာ အရိပ်လိုကြည့်နေခဲ့ ရသည်။ညဘက်သမီးလေးစာကျက်ချိန်တိုင်းအိမ်ရှေ့တွင်ရှိနေတတ်သည့် ထိုကောင်လေးအကြောင်း
ကို ကိုကိုကြီးအားပြောပြခဲ့သော်လည်း အရာမရောက်ပေ။လင်မယားဖြစ်လာပေမယ့် သီသီ့ကို အရင်လိုပဲဆက်ဆံပြောဆိုတတ်သည့်ကိုကိုကြီးက သမီးစကားကိုသာယုံကြည်ခဲ့လေ၏။
သို့သော်..သဲဆုလေးကိုကြေးမုံလိုရှုနေသည့်သီသီကစာမေးပွဲနီးလာလေ..သမီးလေးမူပျက် လာလေဖြစ်နေတာသိတော့ ရင်ပူရလေပြီ။သမီးလေးကိုစိတ်မချသောကြောင့် အိမ်မှာဆရာစုံခေါ်ကာ သင်ပေးနေသည့်ကြားမှ
အထိသီသီစိတ်ပူခဲ့သည်။ဆယ်တန်းစာမေးပွဲဆိုသည်မှာဘ၀၏အဆုံးအဖြတ်မို့သိပ်အရေးကြီး၏။ သဲဆုလေးကိုလှေလှော်ရင်းတက်ကျိုးသွားမှာစိုးလှသောကြောင့်သဲဆုလေးဆယ်တန်းဖြေ
သည့်နေ့တိုင်းသီသီကျောင်းထိလိုက်စောင့်ခဲ့သည်မှာ စာမေးပွဲနောက်ဆုံးနေ့ အထိပင်..။
ကားနားရောက်မလာလေသည်မို့လိုက်ပတ်ရှာသည့်အခါ ကောင်လေးနှင့် လက်ချင်းတွဲပြီး
သီသီ့ မျက်ဝန်းထဲ ဘာမှမမြင်တော့ဘဲ ကောင်လေးကိုပြောဆိုကာ သဲဆုအား လက်အတင်းဆွဲခေါ်ပြီး
အိမ်ပြန်ခဲ့ပါတော့သည်။ အိမ်ရောက်သည့်အခါ သဲဆုက ကိုကိုကြီးကို ငိုပြီးတိုင်လေ၏။
“ ဘာလို့ ကျောင်းထိလိုက်အရှက်ခွဲရတာလဲသီသီ”
“မဟုတ်ဘူးကိုကိုကြီး ၊ ဟိုကောင်လေးပုံစံကသိပ်မဟန်လို့ ”
“မညာနဲ့ သဲဆု…သီသီသိတယ်..အဲ့ ဒီကောင်လေး ကမရိုးသားဘူး၊သမီးကိုခိုးရာလိုက်ဖို့ 
“မတိတ်နိုင်ဘူးကိုကိုကြီး ၊သီသီမြင်တဲ့အတိုင်းပြောတာ ..သဲဆုနဲ့ ဒီကောင်လေးကကြိုက်နေတာ..”
စကားမဆုံးခင် မျက်လုံးထဲမီးတောက်ကာ သီသီ့ ညာဘက်ပါးပြင်တစ်ခုလုံး ကျိန်းစပ်သွားသည်။
ကိုကိုကြီး က သီသီ့ပါး ကို လှမ်းရိုက်လိုက်ခြင်းပင်။
နောက်ဆုံးတော့ မိထွေးက မိထွေးလိုပဲ သမီးကိုဆက်ဆံတယ် ”
သီသီ့တစ်ဘ၀လုံးမြုပ်နှံပြီးချစ်ခင်ဂရုစိုက်ခဲ့ရသောသားအဖကသီသီ့ကို သည်လိုထင်နေမှတော့ အောင်သရဖူမှာ
နေမင်းကြီးက အ၀ါရောင်မှ ပုဇွန်ဆီရောင်ပြောင်းလာလေပြီမို့ထိုင်နေရာမှသီသီထရပ်လိုက်သည်။
ကိုကိုကြီးနှင့်သဲဆုလေးကိုထားရစ်ခဲ့ပြီး သီသီပေါက်ပင်ကုန်းရွာကို ထွက်လာခဲ့သည်မှာ ငါးရက်ရှိပါပြီ။
ထို့ကြောင့် ပူလောင်လှသောသမုဒယများကို တရားရေအေးဖြင့် ဆေးကြောရင်းသီလရှင်ဝတ်ပေးပါရန်
ခွင့်ပန်လေသောအခါ ဆရာတော်ကြီးက စောင့်ခိုင်းထားသဖြင့် သီသီစောင့်နေရခြင်းပင်..။
ပေါက်ပင်ကြီးအောက်မှလှည့်မထွက်ခင် နောက်ဆုံးအနေဖြင့် အပင်ပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တော့
ခုချိန်မှာ သီသီဟာ ဘာကိုမှမမျှော်လင့် ၊မမက်မောချင်တော့ပါဘူး…။
အို..ဒါသဲဆုလေးအသံပါလား။မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သီသီ စိတ်ထဲကြားယောင်နေမိတာနေမှာဟုတွေးနေ စဉ်မှာပဲ ထပ်ကြားရပြန်၏။
ခေါ်သံကပိုမိုသဲကွဲကာသီသီနှင့်နီးလာသလိုခပ်ဝေးဝေးမှာသီသီ့ဆီလှမ်းလာနေသော အရိပ်လေး နှစ်ရိပ်ကိုမြင်လိုက်ရပြီ။ ကိုကိုကြီးနှင့် သဲဆုလေးတို့ ကသီသီ့နောက်လိုက်လာကြပါလား။
သီသီသည် အံ့ သြမင်သက်စွာဖြင့်ပေါက်ပင်အောက်မှာပင် ကျောက်ရုပ်ကဲ့သို့ ရပ်တန့် ရင်း နီးကပ်လာသူနှစ်ဦးကို ငေးမောနေမိသည်။
သမီးလေး…ခုကျတော့လည်း သူ့ မျက်ဝန်းလေးတွေကကြည်လင်သန့်စင်လို့ ပါလား။
ကိုကိုကြီးကတော့သီသီနှင့်မလှမ်းမကမ်းမှာရပ်ကာ အားနာသလိုမျက်နှာညိုညိုနှင့် ရပ်ငေးနေသည်။
“သဲဆုကို ခွင့်လွှတ်ပါသီသီ…အဲ့ ဒီ့ နေ့ကဖေဖေ့ ကိုရှက်ရမ်းရမ်းပြီးငြင်းလိုက်ပေမယ့် 
အလို..ဘုရား..ဘုရား..သီသီထင်ခဲ့သလိုပါပဲလား..ကံသီပေလို့ သာပေါ့ ။
“သီသီ့ ကိုရွဲ့ ပြီးပြန်ပြောနေပေမယ့် သူမကောင်းမှန်းတော့သဲဆုလည်းရိပ်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သီသီထွက်သွားကတည်းကသဲဆုသူ့ကိုအတွေ့မခံခဲ့ပါဘူး။ဖေဖေလည်းသီသီ့ကိုရိုက်မိတာ နောင်တ
ရပြီး သီသီ ဘယ်ထွက်သွားလဲစုံစမ်းပြီး ချက်ချင်းလိုက်လာမလို့ ပါ။
ဒါပေမယ့် …သဲဆုကိုလေ..ဟို..သဲဆုကို သူတို့ အဖွဲ့ တွေ ကားတင်ပြေးလို့ ”
“ဟုတ်တယ်သီသီ…သမီး စာအုပ်ဆိုင်သွားတဲ့ လမ်းမှာသူတို့ သူငယ်ချင်းတွေကားတစ်စီးနဲ့ 
စောင့်ပြီးသဲဆုကိုအတင်းဆွဲခေါ်တာ…ဒါပေမယ့်သဲဆုအော်ပြီး ပြေးထွက်လာတော့
တခြားလူတွေသိသွားလို့ သူတို့ နဲ့ ရိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်”
သိနေသားပဲ။ယခုချိန်ထိ ကိုကိုကြီးက သီသီ့ကိုစကားမပြောဘဲငေးကြည့်နေဆဲပင်။
သီသီကတော့ သီသီ့လက်များကိုလာရောက်ဆုပ်ကိုင်သည့်သဲဆုလေးကိုရင်ခွင်ထဲပွေ့ ထားမိလေပြီ။
“သဲဆုလေ…သီသီမရှိတော့ဘယ်လိုမှမနေတတ်ဘူး..သဲဆုဘာပဲလုပ်ချင်လုပ်ချင် သီသီလိုအပ်တယ် ဆိုတာခုတော့သိပါပြီ..ခုနကကျောင်းဝင်းထဲကနေ ဒီဘက်ကိုလိုက်ပို့ တဲ့ သီလရှင်ဆရာလေး ကပြောတယ်၊
အဲ့ လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ သီသီရယ်..
အို..သမီးလေးကသီသီ့ကိုတောင်းပန်သတဲ့…။သီသီကသူ့ အမေတဲ့ …။လှိုက်ဖိုတုန်ယင်သောရင်ဖြင့် ကိုကိုကြီးဘက်
လှမ်းကြည့်လိုက်တော့သီသီ့ကိုငေးကြည့်နေသည့်ကိုကိုကြီးမျက်ဝန်းများမှ အရိပ်တစ်ခုကို တွေ့ ရ၏။
အခြေအနေကတခဏတာ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားလေ၏။သီသီ့ ရင်ထဲမှာလည်း
“ ကဲ..နေလည်းစောင်းနေပြီ..ဒီကနေ မြို့ ကိုပြန်ရင် သုံးနာရီလောက်ကားမောင်းရဦးမှာ..သီသီ ကိုကိုကြီးတို့ နဲ့ ပြန်လိုက်မှာမဟုတ်လားဟင်”
“ လိုက်မှာပေါ့ ဖေဖေကလည်း..ဟုတ်တယ်နော် သီသီ”
ထိုစဉ်မှာပင် ပေါက်ပင်ကြီးပေါ်မှကြွေကျလာသောပေါက်ပွင့်တစ်ပွင့် သီသီ့ ခြေရင်းဆီသို့ 
“ နှင်းဆီစူးတဲ့ …ရင် ”
< နှင်းဆီပွင့်နှင့်ဆုံတွေ့ ခြင်း >
ထိုနေ့ သည် .... မင်းညိုမန်နေဂျာအဖြစ်ကြီးကြပ်ရသည့်Lifeဆူပါမားကက်ကြီးအတွင်း ဈေးဝယ်သူတို့ ဖြင့် ရှုပ်ထွေး
စည်ကားနေသောပုံမှန်တနင်္ဂနွေနေ့ တစ်နေ့ ပင်ဖြစ်သောကြောင့်ဘာမှမထူးဆန်းခဲ့ပေ။
သို့သော်အပေါ်ဆုံးထပ်ရှိ သူ့ ရုံးခန်းမှခွာပြီးသုံးထပ်တွင်ရှိသော သူငယ်ချင်းကျော်ထိုက်ဖွင့်ထားသည့်
ကော်ဖီဆိုင်သို့ ဆင်းလာမိခြင်းကတော့သူ့ အတွက်ထူးခြားသောအပြုအမူတစ်ခုပင်။
ဆိုင်ဖွင့်ထားသည်မှာ ခြောက်လခန့် ရှိနေပေမယ့်ယခုမှ ဆိုင်လာဖူးသောမင်းညိုကိုကျော်ထိုက်က
၀မ်းသာအားရကြိုဆို၏။ဆိုင်လူရှင်းချိန်မို့ ကော်ဖီတစ်ခွက်စီဖြင့် စကားပြောနေစဉ်ခပ်သဲ့ သဲ့ ကြား
လိုက်ရသည်က ချိုသာ ကြည်လင်သည့်အသံလေး…။
ချွန်မြမြ ဆူး နဲ့ 
ထူးခြားတဲ့ပန်းနှင်းဆီ
သင်းကြည်ကြည် ရနံ့ သင်းပေမယ့်
ရှင်… မမေ့ ပါနဲ့ လေ
ဘာတွေပြောနေတာပါလိမ့်…ဟုဇဝေဇ၀ါဖြင့် မင်းညို လှည့်ကြည့်မိသည့်အခါ ဆိုင်ထောင့်တစ်နေရာတွင်
အားလုံးထဲ မတ်တပ်ရပ်နေသောသွယ်နွဲ့ သည့်ပုံရိပ် လေးကထင်ရှားနေလေသည်….။
“အော်..မဟုတ်ပါဘူးကွ ၊ သူတို့ က ကဗျာရွတ်တဲ့အဖွဲ့ ပါ”
“ ဒီလိုဆိုင်မျိုးမှာ ကဗျာလာရွတ်တယ်..ဟုတ်လား ”
သူကတော့ ကဗျာဆိုလျှင် ကျောင်းသင်ခန်းစာထဲသင်ရသောကဗျာကလွဲလျှင် မဖတ်ဖူးသူပါ။
“သူတို့ ကစာရေးဆရာတွေလေကွာ…မင်းကစိတ်မ၀င်စားလို့ သာမသိတာ...
ဒါပေမယ့်ဒီလိုဆူပါမားကက်ထဲက ကော်ဖီဆိုင်မှာ ကဗျာရွတ်တာတစ်ခါမှမကြားဖူးပါဘူး”
ဆိုင်လာတဲ့သူတွေလည်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်ကွ..ခုဖတ်နေတဲ့စာရေးဆရာမလေးက ဆူးနှင်းဆီတဲ့ဝတ္တုရောကဗျာရောရေးတယ်လေ……သူ့ရဲ့နှင်းဆီကဗျာလေးတွေကသိပ်ကောင်းတယ်.
သို့ သော် ကဗျာရွတ်နေသူလေး၏ကဗျာဆန်လှသည့်မျက်နှာလေးမှမျက်ဝန်းများကလွှဲဖယ်လို့ မရနိုင်ဘဲ
စူးစိုက်ကြည့်နေမိပြီ။သူမကတော့ မည်သူ့ အကြည့်မှဂရုမစိုက်ဘဲ ကြည်လဲ့တောက်ပသော
မျက်ဝန်းလေးများဖြင့် နှင်းဆီဆူး အကြောင်းရွတ်သွားလေ၏။
ထိုနေ့ က ကဗျာရွတ်ပွဲပြီးသည့်အထိသူ ထိုင်နားထောင်သဖြင့် ကျော်ထိုက်တအံ့ တသြဖြစ်နေသည်။
သူမတို့ ပြန်ခါနီးတော့ ကျော်ထိုက်နှင့်စကားလာပြောကြတော့ မင်းညို ငေးမောကြည့်နေမိသည်။
ပါးပြင်၌ သနပ်ခါးပါးကွက်လေးခပ်ရေးရေးထင် နေသောဖြူဝင်းသွယ်ပျောင်းသူလေးသည်
< ရနံ့ မွှေးမြ လှပနှင်းဆီ >
မိသားစုအရေး နှင့် အလုပ်ကိစ္စများသာရှိသည့်မင်းညို၏ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုထဲ နှင်းဆီတစ်ပွင့် ဝင်ရောက်
လာခဲ့လေပြီ။အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့ များတွင် မည်မျှပင်အလုပ်များနေပါစေ ကဗျာရွတ်ချိန်၌ကော်ဖီဆိုင်သို့ 
ရောက်အောင်လာတတ်သည့်သူ့ကို ကျော်ထိုက်ကပင်အံ့ သြယူရသည်။
သူတို့ သိသည့် မင်းညိုဆိုသူမှာ အလုပ်များပိနေသည့် စက်ရုပ်တစ်ရုပ်ပင်။
ယခုတော့ ထိုစက်ရုပ်၏အသည်းနှလုံးထဲ နှင်းဆီဆူး စူးရှခဲ့ပြီမို့ မျက်တက်တက်နာတာတာ
နှင့်သူမကိုမတွေ့ မမြင်ရလျှင် ရင်ထဲ လစ်ဟာနေသည့်ခံစားချက် က ထူးဆန်းလှ၏။
သူနှင့် နှင်းဆီ သည်လည်းကျော်ထိုက်မှတစ်ဆင့်ထံကာ ခင်မင်ရင်းနှီးလာရလေပြီ။
သူသည်လည်းအရင်လို ရုံးခန်းတံခါးပိတ်ပြီးအလုပ်များဖြင့် နပန်းလုံးနေသည့် မင်းညိုမဟုတ်တော့ပေ။
ကဗျာရွတ်ပွဲပြီးလျှင် နှင်းဆီနှင့် စကားပြောရင်းကော်ဖီသောက်ရသည့်အချိန်လေးများကို
နှင်းဆီက မှော်ဘီဘက်မှာနေသည်။ တစ်ဦးတည်းသောသမီးဖြစ်ပြီးအဖေ၊အမေ နှင့်အတူ
သစ်ခွနှင့် နှင်းဆီပန်းများစိုက်ပျိုးရောင်းချသည့်အလုပ်ဖြင့် အသက်မွေးနေသူဟု သူသိထားသည် ။
တိုးတက်နေသောသည်ခေတ်ကြီးထဲ၌ လမ်းသွားရင်း ဖုန်းအင်တာနက်မသုံးသော ၊ ချည်ထည်ထဘီများသာ
စွဲမြဲဝတ်တတ်သော၊ သနပ်ခါးပါးကွက်မကွက်ရလျှင်မနေနိုင်သော၊ ဆံပင်ဖားလျားချပြီးအပြင်မထွက်သော၊
သေသပ်စွာ စည်းနှောင်ထားသည့် ဆံပင်တွင် နှင်းဆီပန်းတစ်ပွင့် အမြဲပန်ဆင်တတ်သော မြန်မာမလေးရှိနေ သည်ဟု တစ်စုံတစ်ယောက်က လာပြောလျှင် နားအကြားဖြင့် သူ ယုံနိုင်မည်မထင်။
နှင်းဆီသည် သူ့ ဘ၀တွင် မတွေ့ ကြုံဖူးသည့်ရိုးအေးဆန်းကြယ်လှသည့်မိန်းကလေးပင်။
မြန်မာစာအဓိကဘွဲ့ တစ်ခု ကိုအဝေးသင်ဖြင့်ယူပြီးကတည်းက နှင်းဆီ ပျော်မွေ့ ရာသည်
သူမ၏ပန်းဟေ၀န်ခြံကြီးပင်ဖြစ်ပါသတဲ့ ။ မဂ္ဂဇင်းတိုက် များသို့ စာမူပို့ သည့်အခါ ၊ ကဗျာဝိုင်းများရှိသည့်အခါများသာ နှင်းဆီရန်ကုန်မြို့ ထဲလာပါသတဲ့ ။
နှင်းဆီပြောပြသမျှတအံ့ တသြနားထောင်နေသည့်မင်းညိုပုံစံကတော့ သားနားသန့်ပြန့် ကာ
တကယ့်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ဦးကဲ့သို့ ပင်။ အရပ်မြင့် ခြင်း၊ ရုပ်ရည်သန့်ပြန့် ကြည့်ကောင်းခြင်း၊
စမတ်ကျကျဝတ်စားတတ်ခြင်းများကြောင့်လည်း မှိုလိုပေါက်လာသော DMA ဘွဲ့ ရများကြား
သည်နှစ်မှ အသစ်ဖွင့်လိုက်သော Life ဆူပါမားကက်ကြီး ၌ သူအလုပ်ရလိုက်ခြင်းပင်။
သို့ သော် သူ နှင့် DMA အတူတက်ခဲ့သည့်သူငယ်ချင်း ၀င့်ချယ်၏ထောက်ခံအားပေးမှုတော့ ပါခဲ့ရလေ၏။
Life သူဌေး၏တခြားလုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုတွင်အလုပ်ဝင်နေသည့် ၀င့်ချယ်က သူ့ ကိုဖုန်းဆက် ကာ သည်နေရာ၊
သည်ရာထူးအားလာလျှောက်ပါဟုခေါ်သဖြင့် သာ လျှောက်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ရမည်ဟုသိပ်မထင်ထားခဲ့ပေ။
သို့ ပေမယ့် လက်ရှိအလုပ်ထက် ငါးဆများသော လစာနှင့်မြင့်မားသည့်ရာထူးကိုသူရရှိခဲ့သည်။
ကောင်းမွန်သည့် လခနှင့်ထိုက်တန်စွာမင်းညိုအလုပ်လုပ်ပေးနေခြင်းသာဖြစ်သော်လည်း အများအမြင်မှာတော့ သားနားသန့်ပြန့် ပြီးLife တွင် အချိန်ပြည့်ရှိနေသောသူ သည် ဆူပါမားကက်ကြီး၏ရှယ်ယာဝင်လိုလို
ကျော်ထိုက်ကလည်းကွယ်ရာမှာမည်သို့ ပြောထားမှန်းမသိဘဲနှင်းဆီကပါ သည်လိုထင်လာတော့
သူရှင်းပြရသေးသည်။ ထိုသို့ ရှင်းပြလိုက်လေမှ နှင်းဆီကပြုံးကာပြောလာသည်။
“ကိုမင်းညို က ပညာတတ်သလောက် မာန်လည်းမတက်ဘူး၊တကယ်လေးစားတယ်”
“ဟာဗျာ..ဒီလောက်ကြီး မဟုတ်ပါဘူး နှင်းဆီရယ်…ကျွန်တော်လည်းလခစားပါ”
သူ့ ကိုအထင်ကြီးလေးစားခြင်းများနှင့်ပြောနေသည့်နှင်းဆီကို ဘာမှပြန်မပြော
ဘဲ မချိပြုံးဖြင့်သာမင်းညို ငြိမ်နေလိုက်ရပါသည်။
< နှင်းဆီတော ၌ မောဟိုက်ခြင်း…>
ကျော်ထိုက်နှင့် အတူ မှော်ဘီသို့ လိုက်မသွားခဲ့လျှင် သူ့ အတွက် အံ့ သြဆန်းကျယ်မှုများ
နှင်းဆီဖိတ်သော အိမ်သစ်တက်ပွဲ အလှူသို့ သူရောက်ရှိသွားလေမှ ပန်းဟေ၀န်ခြံကြီးအား သူမိန်းမော သွားရသည်။တစ်ပတ်တစ်ခါ ကဗျာဝိုင်းသို့ လာလျှင် သနပ်ခါးပါးကွက်လေးဖြင့် ချည်ထည်လေးများသာ ၀တ်လာတတ်သောဆူးနှင်းဆီသည် အညတရပန်းစိုက်သူလေး မဟုတ်ပေဘူးပဲ။
နှင်းဆီစိတ်ကြိုက် ပုံစံပေးဆောက်ထားသည့် တစ်ထပ်တိုက်အသစ်ပြားပြားလေးသည်
ပန်းများအလယ်တွင် ကဗျာဆန်နေသည်။ လမ်းထွက်လျှင်နှင်းဆီဖုန်းအင်တာနက်မသုံးသော်လည်း
မှန်လုံကာ အဲကွန်းတပ်ထားပေးသည့် စာကြည့်ခန်းထဲ ၌ Appleလက်ပ်တော့ အဖြူရောင်လေးနှင့်အတူ
ပရင်တာ နှင့်မိတ္တူကူးစက်များရှိနေသည်။နှင်းဆီ စာရေးလျှင် လက်ဖြင့် မရေးဘဲကွန်ပြူတာဖြင့် သာ ရိုက်သတဲ့ ။အွန်လိုင်းတက်ပေမယ့် ဂျီမေးလ် ၊ဖေ့စ်ဘုတ်သိပ်မသုံးဘဲ သစ်ခွ၊နှင်းဆီနှင့်ပတ်သက်သည့်
ပန်းပင်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများကို ရှာသည့်အချိန်သာ အင်တာနက်သုံးလေသတဲ့ ။
စားသောက်ပြီးတခြားဧည့်သည်များပြန်သွားကြတော့ နှင်းဆီက သူတို့ ကို ခြံထဲခေါ်လာသည်။
တိုက်၏ညာဘက်ခြမ်းတွင် အပွင့်ဝေေ၀ဆာနေသော သစ်ခွစင်များရှိပြီး ဘယ်ဘက်ခြမ်း ၌
ရောင်စုံနှင်းဆီပန်းခင်းရှိလေ၏။ တစ်ရောင်စီ အကန့်လိုက်စိုက် ထားသည့် လှပသောနှင်းဆီပန်းများကြားရောက်သွားသည့်အခါမှာတော့ချိ်ုအီသည့် နှင်းဆီနံ့ ကိုရှူရှိုက်မိလေပြီ။
“လှလိုက်တဲ့ပန်းတွေ ၊ ဒီပန်းတွေနေ တို့င်းခူးရတာပေါ့ ..ဟုတ်လား”
“နှင်းဆီကိုယ်တိုင်တော့ မခူးရဘူး..ခြံထဲမှာအလုပ်သမားတွေရှိပါတယ်…ဒါပေမယ့်ဖေဖေနဲ့ 
နှင်းဆီက စောင့်တော့ကြည့်ရတာပေါ့ …မေမေကသစ်ခွစင်တာဝန်ယူတယ်လေ”
“တစ်နေ့ တစ်နေ့ တော်တော်ရောင်းရမှာပဲနော်”
“ရောင်းရတယ်ကိုမင်းညို ၊ မင်္ဂလာဆောင်တွေကသစ်ခွမှာသလို အခမ်းအနားတွေကလည်း
နှင်းဆီမှာကြတယ်..အော်ဒါမပြတ်ဘူး.မြို့ ထဲသွားရောင်းတဲ့ ပန်းသည်တွေလည်း
နှင်းဆီပန်းလာယူရောင်းတယ်လေ…မနက်ပိုင်းဆို နှင်းဆီ လည်းဖေဖေတို့ ကို ကူလုပ်ပေးရတယ်..
နေ့ ခင်းထမင်းစားပြီးချိန်လောက်မှ နားပြီး စာရေးရတာ…။
ပြောရရင်ဖေဖေတို့ က စာရေးတာသိပ်သဘောကျတာမဟုတ်ဘူး၊ နှင်းဆီက၀ါသနာကြီးလို့ သာ
မပြောတာ၊ အပင်ပန်းခံအိပ်ရေးပျက်ခံပြီး ရလာတဲ့ စာမူခနဲ့ မတန်ဘူးတဲ့ ”
“ အော်…စာမူခက တော်တော်နည်းလို့ လား”
“ ကဗျာတစ်ပုဒ် …. လေ၊ ၀တ္တုဆို ….ပါ”
“ဟာ..ဒီလောက်ပဲရတာလား ၊ ဒါဆို စာရေးတာသက်သက်နဲ့ ဘ၀ရပ်တည်လို့ ဘယ်ရမလဲနော်”
“ဟုတ်တယ်…ဒါပေမယ့် ဝါသနာကြီးလွန်းလို့ အဆင်းရဲခံပြီးစာပေနယ်တစ်ခုတည်းမှာပဲ
ရပ်တည်နေသူတွေလည်းရှိတယ်၊ နှင်းဆီကတော့ စာမူခဆိုတာ ထည့်မတွက်ဘဲ ကိုယ့်အနုပညာလေးတွေ
သူ့ ကိုသိမ်မွေ့ အေးဆေးစွာရှင်းပြနေသောနှင်းဆီ၏ဆံကေသာထက်ဝယ်ပန်းရောင်နှင်းဆီ
ပွင့်လေးတစ်ပွင့် ရှိနေသည်။ အလှူနေ့ ဖြစ်၍ ပန်းနုရောင်ဇာဝမ်းဆက်လေးဝတ်ကာ နောက်တွဲ ဆံထုံးလေးထုံးထားသောနှင်းဆီသည်မဟာဆန်ဆန်လှနေ၏။မိတ်ကပ်ပါးပါးခြယ်ထားသည့်
ပန်းသွေးရောင်သမ်းမျက်နှာလေးကို ငေးကြည့်ရင်း အတွေးများစွာဖြင့်မင်းညိုသက်ပြင်းတစ်ချက်
< ဆူးခြွေ နှင်းဆီ… >
နှလုံးသားမှာ ၀င့် ဖြာစေဖို့ 
နှင်းဆီဦး ကို ခူးလှည့်ပါ
ကဗျာရွတ်နေသည့် နှင်းဆီမျက်နှာလေးကိုငေးရင်း မင်းညိုရင်ထဲသိမ့်ခနဲ လှုပ်ရှားသွားသည်။
နှင်းဆီဦးကိုခူးလှည့်ပါတဲ့လား…တကယ်ပဲ ခူးစေချင်နေပြီလား မိန်းကလေးရယ်။
ပွဲပြီးတော့ ထုံးစံအတိုင်းကော်ဖီအတူတူသောက်ကြသည့်အခါ နှင်းဆီကသာ စကားဝေဆာနေ ပေမယ့် 
သူ ကတော့ တွေဝေတိတ်ဆိတ်နေသည်။ကျော်ထိုက်ကပင်မတုန်မလှုပ်မင်းညိပုံစံကို အားမလိုအားမရဖြစ်ပြီး
“ခုတစ်လော…နှင်းဆီရွတ်တဲ့ကဗျာတွေက မင်းကို ရည်ညွှန်းနေသလိုပဲကွ”
“မင်းကလဲ..လုပ်မနေနဲ့ … သူတို့ ကဗျာဝိုင်းကလူတွေတောင်သိနေလောက်ပြီ…
မင်းလာတာနဲ့ နှင်းဆီမျက်နှာလေးက ပြောင်းသွားတာကိုး…အားလုံးရိပ်မိနေတာတောင်
“ငါလား..ငါ ဘာဖြစ်လို့ လဲ”
ကော်ဖီ အတူတူသောက်ပြီးစကားပြောကြရုံ အဆင့်မှာပဲ မင်းရပ်နေတယ်လေ…”
“ဟာ..ဒီကောင်တော့..နှင်းဆီကို ဖွင့်မပြောသေးဘူးလား..မင်းသူ့ ကိုချစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလား
ခုတော့သိရလေပြီ။ နှင်းဆီအပေါ်ယှက်နွယ်မိလေသည့် သူ့ တွယ်တာမှုကိုသူသာလျှင်အသိဆုံးပါ။
သိမ်မွေ့ အေးချမ်းလှသည့် မိန်းကလေးကို မြတ်နိုးရခြင်းများကမင်းညိုရင်ထဲအပြည့်ရှိပါ၏။
သူ သက်ပြင်းမောတစ်ချက် ချလိုက်ပြီးချိန် ၀င့်ချယ်ထံမှ ဖုန်းဝင်လာသည်။
“မင်းညို ၊ ဒီနေ့ အိမ်စောစောပြန်ခဲ့ဟာ…အန်တီ့ ကို ငါ လိမ်းဆေးလာပို့ ပေးမလို့ ၊အံတီကလည်း
ငါကြိုက်တဲ့ ရှောက်သီးသုတ်ကျွေးမယ်တဲ့ ဟ…”
“အမလေး..ဖြစ်နေလိုက်တာ..နင်ကငါနဲ့ မဆုံချင်ဘူးပေါ့ လေ”
“မရဘူး… ငါ နင့်ကို တိုင်ပင်စရာတစ်ခုလည်းရှိတယ်..ညနေ နင်ပြန်မလာမချင်း
ပြောပြောဆိုဆို ဖုန်းချသွားသည့်ဝင့်ချယ်ကြောင့်ဒီညနေအိမ်စောစောပြန်ရန်အတွက် လုပ်လက်စ
အလုပ်များကို အမြန်လက်စသတ်ဖို့ကော်ဖီဆိုင်ထဲမှ ချက်ချင်းထွက်လာခဲ့ သည့်အခါမှာတော့
ကျော်ထိုက်ကခေါင်း တဆတ်ဆတ်ငြိမ့်ကာ ငေးကြည့်နေလေ၏။
< ကွက်လပ်မရှိ တွယ်ငြိသည့် နှင်းဆီ>
“ ဒီဆေးကလိမ်းရတာ နည်းနည်းတော့နံတယ်အန်တီ ၊ ဒါပေမယ့် သိပ်ကောင်းတယ်၊
၀င့်ချယ်သူငယ်ချင်းအဖေ လေဖြန်းတုန်းကလည်းဒီဆေးနဲ့ ပျောက်သွားတာ၊
သူတို့ ကဆိုင်တိုင်းမတင်ဘူး၊နည်းနည်းလေးပဲရှိလို့ ခင်မင်သူတွေပဲရောင်းတာတဲ့ ”
အမေ့ဘယ်ဘက်ကိုယ်တခြမ်း လေဖြတ်သွားသည်မှာ ခြောက်လကျော်လာခဲ့ပြီ။
မင်းညို နှင့် ညီလေး တို့ သာရှိသည့် သည်အိမ်ကြီးမှာအမေ့ ကို အနီးကပ်ပြုစုဖို့ ရန်လိုအပ်လာသည့်
အခါ လစာကောင်းသည့်မင်းညိုက ထွက်လို့ မရသောကြောင့်သာမန်ဝန်ထမ်းညီလေးက အလုပ်ထွက်ပြီး
အမေ့ နားနေပေးခဲ့သည်။အမေကိုချစ်သည့်သားယောင်္ကျားလေးနှစ်ယောက်၏အချိုး မကျသောပြုစု
လုပ်ကိုင်ပေးမှုများကို စိတ်မချဘဲ လာရောက်ပြုစုပေးသူကတော့ တလမ်းထဲနေသည့် ၀င့်ချယ်ပင်။
အဖေတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကတည်းက ခင်မင်လာခဲ့ကြသောဝင့်ချယ်တို့ မိသားစုသည် ပွဲရုံလုပ်ငန်းဖြင့် 
ချမ်းသာသော်လည်း မာနမရှိဘဲ သဘောကောင်းလှသည်။
အဖေမဆုံးခင် ပင်စင်ယူခါစ ကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိသေးခင်ကလည်း ရှိသမျှငွေကိုသာယူထားပြီး
ယခုလက်ရှိခြံလေးကို အလကားနီးပါးဈေးဖြင့် ရောင်းပေးသူက ၀င့်ချယ်အဖေပင်။
၀င့်ချယ်အမနှစ်ယောက်ကလည်း စင်ကာပူမှာသူတို့ အိမ်ထောင်တွေဖြင့် အခြေကျနေလေတော့
အဖော်မရှိသည့် ၀င့်ချယ်က မင်းညိုကို ခင်မင်အားကိုးသည်။
ကြောင့်မင်းညို ခြိုးခြံခြစ်ခြုတ်ပြီး အလုပ်လုပ်ရင်းမနက်ပိုင်း DMA သင်တန်း တက်သည့်အခါ
အမေ လေဖြတ်သွားကာ ညီလေးအလုပ်ထွက်လိုက်ရသောအိမ်ထောင်စုတွင် သူ့ ဝင်ငွေဖြင့်သာ
လည်ပတ်နေရသည်မို့လစာနည်းသည့် အရင်အလုပ်တုန်းက သူတို့ အိမ်၏စားဝတ်နေရေး မပြေလည်ခဲ့ပေ။ထိုအချိန်ကတည်းကမာနကြီးပြီးသူတပါးအကူအညီမယူချင်သည့်မင်းညို၏ အအော်အငေါက်တာ ခံကာ အမြဲဖြည့်ဆည်းပေးသူက ၀င့်ချယ်ပင်။
သည်လိုမျိုးသူ့ အပေါ် ကောင်းလွန်းနေသည့်ဝင့်ချယ်ရင်ထဲမှတွယ်တာမှုသံယောဇဉ်
တရားများကိုအမေနှင့်ညီလေး က အသိအမှတ်ပြုပေးပေမယ့်သူ မသိချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့ ၏။ ယခုတော့ သူ့ ရင်ထဲမှာနှင်းဆီတစ်ပွင့်ကနေရာယူထားလေတော့ ၀င့်ချယ်အတွက် ကွက်လပ်မရှိတော့ပေ။
သို့ သော်လည်း..အမေကတော့ ၀င့်ချယ် မှ ၀င့်ချယ်ပင်။
ညစာစားပြီးဝင့်ချယ်ပြန်သွားသည်နှင့် ဓါတ်ပြားဟောင်းကြီးကို ဖွင့်ပါလေတော့သည်။
“မင်းညို.. သားအသက် ၂၈ ရှိပြီနော်၊မငယ်တော့ဘူး၊အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားတော့”
“ဟားဟား၊ ကိုကိုရေ..အမေဘယ်သူ့ ကိုပြောချင်လဲဆိုတာညီသိနေတယ်နော်..စိတ်ကူးမလွဲနဲ့ ”
“ဟုတ်တယ်သား၊ တို့ မိသားစုအခြေအနေနဲ့သားဘ၀ထဲကိုဝင်လာတဲ့သူဟာ အမေတို့ နဲ့ 
အတူနေနိုင်မယ့်အတွင်းသိအစင်းသိမှဖြစ်မှာ.. အမေ့ ရင်ခွင်ထဲကသားကိုဆွဲထုတ်သွားမယ့်
မိန်းကလေးမျိုးဆိုရင် အမေလေ..အမေ ကျန်ခဲ့မှာသားရဲ့ ”
ပြောရင်းအမေကငိုလေတော့မင်းညို ကြင်နာသနားစွာဖြင့် အမေ့ ကိုပွေ့ ဖက်လိုက်မိသည်။
“အမေရယ်..၊သားက အမေ့ ကိုထားရက်မယ့် သူမဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊စိတ်ချ အမေ့အတွက်
အလိမ္မာအိမ်ပါချွေးမမျိုးပဲ သားရွေးမှာ ”
ပြောနေရင်း နှင်းဆီ၏မျက်နှာလေးအားမြင်ယောင်မိလေသည့်အခါမင်းညို အံကြိတ်ကာ နုတ်ခမ်း
< မျှော်လင့် နှင်းဆီ>
မွှေးရနံ့ မှာ သူမတိမ်း
ကဗျာရွတ်နေသည့် နှင်းဆီအသံက တုန်ရင်လှိုက်ခတ်နေသလို မျက်နှာလေးနွမ်းလျနေသည်ကို
လှမ်းမြင်ရသည့် မင်းညိုရင်ထဲမှာလည်း မိုးပြိုနေပါပြီ။စိမ်းရက်သူလည်း ငိုချင်နေသည်ဆိုတာ နှင်းဆီကို သူဘယ်သို့ ပြောရပါ့ ။ညစဉ်လိုလို ဖုန်းပြောဖြစ်နေသည့် အလေ့အထကိုလည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကာ
ကဗျာရွတ်ပွဲပြီးသည်နှင့် သူ့ ကိုခဏသာနုတ်ဆက်ပြီး နှင်းဆီပြန်သွားသည်။ သူခေါင်းငိုက်စိုက်ကျကာ
ကျန်ခဲ့ချိန်မှာတော့ ကျော်ထိုက် ပြောပါတော့သည်။
“ မင်းလုပ်ပုံမဟုတ်သေးဘူးမင်းညို၊နှင်းဆီသိပ်ခံစားနေရပြီ၊သူ့ ခမျာပန်းပင်တွေကြား
အေးအေးဆေးဆေးလေးနေနေတာ၊မင်းနဲ့ မှပြောင်းလဲလာတာသူတို့ တဖွဲ့ လုံးလည်းသိတယ်၊
ဒီခေတ်ကြီးမှာ နှင်းဆီလို သိမ်မွေ့ ယဉ်ကျေးတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးနဲ့ ဆုံတာ မင်းကနာနေတယ်ထင်လို့ လား”
ကျော်ထိုက်စကားများက သူ့ နှလုံးသားထဲထိုးစိုက်စူးရှလေပြီ။
နှင်းဆီပွင့်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ရလျှင်သူ ..နာသည်ဟုမထင်ပါ။
သို့ သော်..ထိုနှင်းဆီလေးနာကျင် ပင်ပန်းသွားမှာတော့သူစိုးလှသည်။
ပန်းဟေ၀န်ခြံထဲမှ နှင်းဆီသခင်မလေးသည် သူ့ မိသားစုအတွင်းသို့ ဘယ်နည်းနှင့်မျှ ၀င်လာနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။စာကဗျာများရေးနေသည့် နှင်းဆီ၏လက်ချောင်းနုနုလေးများသည် အမေ့ ကိုလိမ်းပေးရမည့်
ဆေးနံ့ များစွဲကျံ သည့်လက်ချောင်းများအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားရ မည်ကိုသူမလိုလားပေ။
ဖြစ်လာလျှင် နှင်းဆီနှလုံးသားမှာ အနုပညာတွေ ဖူးပွင့်ပါဦးတော့မလားဟုသူစိုးရိမ်လှပါသည်။
ကျော်ထိုက်ကတော့ သူ့ အတွေးအမြင်ကိုဆန့်ကျင်၏။
“မင်းအဖြစ်က မုန့် ဆီကြော်ကဘယ်နေမှန်းမသိ ၊ နုတ်ခမ်းနာနဲ့ တည့်ပါ့ မလားဆိုတာလိုဖြစ်နေပြီ။
မဟုတ်ဘူးလား၊ လက်ထပ်တာကိုမစဉ်းစားပါနဲ့ ဦးကွ၊ချစ်ရင်တွဲကြလေ၊ တွေ့ ကြလေ”
“တော်တော့ ကျော်ထိုက်၊ ဒီလိုပြောတာငါမကြိုက်ဘူး ၊ ခေတ်တွေဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း
ငါတို့ ဟာမြန်မာယောင်္ကျားသားတွေပါ ၊ အမျိုးကောင်းသားတစ်ယောက်ဟာ မိန်းကလေးတိုင်းကို
နှမချင်းစာနာပြီးတွေးပေးရမှာပဲ ၊ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေကြတဲ့ ခုခေတ်နေထိုင်မှုကို ငါလုံးဝသဘောမကျဘူး၊
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို သေတစ်ပန်သက်တစ်ဆုံးလက်မတွဲနိုင်ဘဲ ၊ ကိုယ့်ဘ၀ထဲဆွဲမခေါ်ရဲဘဲ ငါဘယ်တော့မှ ချစ်တယ်လို့ မပြောဘူးကွ”
ဒေါမာန်ဖြင့်ပြောလိုက်သည့် သူ့ စကားအဆုံးမှာ ကျော်ထိုက်က မထီတတီပြုံးကာ ပုခုံးတွန့် လိုက်လေသည်။
“မင်းပြောသလိုဆို မိန်းမတစ်ယောက်ကိုလက်မထပ်နိုင်ရင် မတွဲရဘူးပေါ့ ၊ဟုတ်လား
တောမှာသွားပြောမင်းညို ၊ ဒီခေတ်မှာ မိန်းကလေးတွေကိုယ်တိုင်က သဘောတူလိုက်လျောလို့ 
တွဲနေကြတာပေါ့ ကွ ၊ အေး..ခြွင်းချက်အနေနဲ့နှင်းဆီလိုမိန်းကလေးမျိုးကတော့ဒီခေတ်မှာ ရှားပါးပစ္စည်းကွ”
သူသိပါသည်။ ရှားပါးသည့်အရာဆိုလျှင်တန်ဖိုးကြီးမည်။ အမြတ်တနိုးထားနိုင်ရမည်ပေါ့ ။
သူ ချစ်သောနှင်းဆီပန်းလေး အနုပညာဟေ၀န်တောကြီးထဲတွင်ငှားငှားစွင့်စွင့် ဖူးပွင့် လန်းဆန်း
နေသည်ကိုသာ မြင်လိုသည်မို့သူ…ရင်နာနာဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ချရပါတော့မည်။
< နှင်းဆီစူးတဲ့ …ရင် >
“ကဲ..သွားရအောင် မင်းညို ၊ ငါကားယူလာပြီ၊အန်တီရေ ဒီနေ့ ဝင့်ချယ်ထီဝင်ထိုးမယ်သိလား၊
သူက ဘယ်တုန်းကမှ ၀င့်ချယ်မောင်းတဲ့ ကားပေါ်လိုက်တာ မဟုတ်ဘူး ၊ ဒီနေ့ သစ်ခွသွားကြည့်မှ
ကားယူလာခဲ့ ဆိုလို့ဝင့်ချယ်တောင်အံ့ သြနေတာ..သိလား ”
အမေကတော့ မင်းညိုတို့ နှစ်ယောက်ကို ကြည်နူးပီတိပြုံးဖြင့် ကြည့်နေလေ၏။
အမေစိတ်ချမ်းသာနေမှာသူသိပါသည်။ သိသောကြောင့်လည်း သူ့ ရင်နာကျင်စေမည့်ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုး သူချခဲ့ခြင်းပင်။
မမျှော်လင့်ဘဲ သူ့ ဆီမှစကားကြားရသည့်အခါအံ့ သြ၀မ်းသာသွားသည့်ဝင့်ချယ် မျက်လုံးလေးများထဲမှာ သူ့ အပေါ်ချစ်ခြင်းများပျော်ဝင်နေသည်ကို မြင်ရလေတော့
သူ့ ရွေးချယ်မှုဟာ မမှားနိုင်တော့ဟု ယုံကြည်မိပါ၏။
ကဗျာရွတ်ပွဲသို့ လည်းမလာ ၊ ကျော်ထိုက်ဆိုင်သို့ လည်းမသွားဘဲ နှင်းဆီနှင့်ပတ်သက်သမျှ သူရှောင်ကာ
အဆက်ဖြတ်ထားသည်မှာ သုံးလရှိပါပြီ။အစတော့ ညဘက်များမှာ နှင်းဆီသူ့ ဆီဖုန်းခေါ်သေး ပေ မယ့်သူမကိုင်ပေ။မက်ဆေ့ မျှပင်ပြန်မပို့ဘဲ လချီကြာအောင်ရှောင်နေသည့် ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို ခံပြင်းစိတ်ဖြင့်
မင်းဟာ ကိုယ်မပန်သင့်တဲ့ ပန်းလေးတစ်ပွင့်ဖြစ်လို့ခူးခြွေဖို့ လက်မလှမ်းတော့ပါဘူး။
မင်းနဲ့ အဆက်ဖြတ်ထားတဲ့ အချိန်တွေဟာ ကိုယ့်အတွက်လည်းငရဲတမျှပူလောင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာမင်းမသိစေရပါဘူး။
မင်းလက်ကလေးတွေ နဲ့ပန်းဟေ၀န်ခြံထဲက ပန်းလှလှလေးတွေကိုသာဆုပ်ကိုင်နမ်းရှိုက်ပါ။
မင်းလက်ဖ၀ါးနုနု သွေးခြေဥမယ့်အဖြစ်ထက်စာရင် ကိုယ့် နှလုံးသားကိုသာ အနာတရဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
ခု ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ ဆူးစူးနေပြီ..နှင်းဆီ။ဒါပေမယ့်ကိုယ်ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူးကွယ်။
ကိုယ်..နောက်လ မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်လို့ ပြောဖို့ မင်းဆီလာနေပါပြီ။
ကိုယ်လက်ထပ်မယ့်ဇနီးလောင်းနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ အခါ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့
ဒါပေမယ့် မင်းမဟုတ်တဲ့ကိုယ့်သတို့ သမီးအတွက်ပန်းဟေ၀န်ခြံထဲက ပန်းလေးတွေနဲ့ အလှဆင်ချင်တယ်။
ကိုယ့်မင်္ဂလာပွဲ မှာ မင်းမပါခဲ့ပေမယ့်မင်းခြံထဲက ပန်းကလေးတွေကိုတော့ ပါဝင်စေချင်တာ ကိုယ့်ရဲ့ နောက်ဆုံးလက်ကျန်အတ္တပါ။
“ မင်းညိုရေ…ရောက်တော့မလား..ဆိုင်းဘုတ်လဲတွေ့ သေးဘူး”
၀င့်ချယ်အသံကြားမှ မင်းညိုအတွေးအိပ်မက်မှ လူးလွန့် နိုးထလာသည်။
ကားက မှော်ဘီမြို့ စွန်သို့ ရောက်လာလေပြီ။ ခဏကြာတော့ ပန်းဟေ၀န် ဆိုသည့်ဆိုင်းဘုတ်
မြင်ရပြီမို့ဝင့်ချယ်က ကားကို ခြံထဲသို့ ကွေ့ မောင်းလိုက်လေသည်။
ဟော..ဟိုးနှင်းဆီပင်တွေထဲက အရိပ်လေးဟာ နှင်းဆီပါလား။
မင်းညိုသည် သက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုလေးနင့် ပင်ပန်းစွာမှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးသည့်အခါမှာတော
ကားပေါ်မှဆင်းကာ ၀င့်ချယ်လက်ကို ဆွဲကိုင်ရပ်စောင့်ရင်း သူတို့ ရှိရာဆီသို့ 
လာနေသည့် နှင်းဆီကို ပြုံးပြလိုက်ပါ၏။